ब्लग ट्याग: मेरो बारे मा re रहस्य Martech Zone
ब्लग ट्याग: मेरो बारे मा Sec रहस्य
सोमबार, डिसेम्बर 11, 2006 आइतबार, जुलाई 27, 2014 Douglas Karr
शेल इजरायल मलाई ब्लग-ट्याग गरिएको छ। खेल भनेको तपाईको बारेमा पाँच रहस्य बताउनु हो र त्यसपछि तपाईंलाई चिन्ने पाँच अन्य व्यक्तिहरूसँग लि link्क गर्नु हो र त्यसपछि उनीहरूले पाँच चीजहरू बताउनुपर्दछ जुन तपाईंलाई सायद उनीहरूको बारेमा थाहा छैन।
ओफिडियोफोबिया: म हुँ। तिनीहरूलाई खडा गर्न सक्दैन! मैले ठट्टामा भने कि यदि म सर्पमा दगुर्छु भने, म मेरा बच्चाहरूलाई त्यसमा फ्याँक्छु र चिच्याउँने प्वालमा कतै चकनाचूर पार्छु।
मेरो जीवनमा केहि कहिल्यै खुशी, उपलब्धी र गर्वको तुलना गर्दैन जुन मेरा बच्चाहरूले मलाई भर्दछन्, बिली र केटीसँग। केहि छैन। (मैले तिनीहरूलाई साँपमा फ्याँक्ने छैन, मैले वाचा गरेको छु)।
म मेरो पहिलो पत्नी मजाक मा मेरो पहिलो पत्नी को रूप मा परिचय थियो। मलाई थाहा थिएन यो साँचो होईन।
म पैसालाई घृणा गर्छु। म पैसालाई यत्ति घृणा गर्छु कि मँ मेरो चेकबुक (हरू) लाई कहिले पनि सन्तुलनमा राख्दिन। यदि मसँग एक मिलियन डलर छ, म मात्र एक मिलियन डलर को पैसा समस्याहरु छ।
मेरा सयौं साथीहरू छन्, जबकि मेरो बचपन देखि मात्र एक साथी छ। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी माइक आफ्नो अविश्वसनीय पत्नी, वेंडीसँग भ्याकूवरमा बस्छन्। माइकसँग फिटनेस उपकरण कम्पनी छ र वान्डी एक टेलिभिजन निर्माता र अभिनेता हुन्। तिनीहरू अविश्वसनीय मानिसहरू हुन्।
टैग: ब्लग ट्यागdouglas karrमाइक मोरोजरहस्यट्यागवेंडी रसल
तपाइँका पाठकहरूलाई शिक्षित गर्नुहोस्
Bloggin 'सजिलो छैन! भोकसँग पनि
डिसेम्बर १, २०१ 11 2006:२:8 अपराह्न
के वेंडी, तपाईको साथीको पहिलो श्रीमती?
डिसेम्बर १, २०१ 11 2006:२:9 अपराह्न
वेंडी माइकको पहिलो, अन्तिम र एक मात्र पत्नी हो! हो!
डिसेम्बर १, २०१ 13 2006:२:4 अपराह्न
मलाई लाग्यो कि यी तपाईंको बारेमा "रहस्यहरू" हुन्। मलाई पनि ती सबै चीज थाहा छ। विशेष गरी number नम्बर र यसले मलाई दु: ख दिन्छ।
डिसेम्बर १, २०१ 13 2006:२:7 अपराह्न
मलाई लाग्छ कि मैले तपाईलाइ बग गर्नको लागि दुई भन्दा बढी खाता खोलेको छु, आयरिश! आशा छ तपाईं र तपाईंको परिवारमा एक चाडपर्व छुट्टीको मौसम छ।